Boqortooyadii Cusmaaniyiinta(Qormooyin Taxane Ah)
Tuesday December 03, 2019 - 17:08:00 in Articles by Hadhwanaag News
Boqortooyadii Cusmaaniyiinta (1299–1923)
Akhristayaasha sharafta leh halkan waxaan idiinku soo gudbinayaa qormooyin taxane ah oo ka waramaya dawladii cusmaaniyiinta.
Boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay sidoo kale caan ku ahayd taariikhda Boqortooyadii Turkiga, oo socotay 1 Noofembar 1299 ilaa 24 Luulyo 1923. Heerkeedii ugu saraysay gaadhay (qarnigii 16aad - 17aad), Boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay ku fidday seddex qaaradood. Galbeedka Aasiya, Bariga iyo Koonfur-galbeed Yurub, Caucasus, iyo Waqooyiga Afrika waxaa xukumaysay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay ka talinaysay 29 dowladood iyo dalal badan oo vassal(dad dhul iyo beero la siiyo si ay u difaacaan guud ahaan dhulkaas), kuwaas oo qaarkood markii dambe galay boqortooyadii, halka intii kale ay heleen madaxbannaani intii lagu gudajiray qarniyadaas.
AASAASITAANKII BOQORTOOYADII CUSMAANIYIINTA
Boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay bilaabantay ka dib imaatinki hogaamiyaha Kayi Tribe, Ertugrul iyo wiilkiisa ​​ugu dambeeyay, Cusmaan Ghazi ee Boqortooyada Rome ee Anatolia (Aasiyada Yar) kana timid Aasiyada Dhexe. Waxay gacan ka geysteen oo ay taageero balaadhan siiyeen Seljuk Suldaan Kaihusrev labaad sidii loo jabin lahaa ciidanka Mongolia ee Eskisehir kadib markii la badbaadiyey Seljuk ofs Empire of Rome. Shaqadan aadka u wanaagsan awgeed, Ertugrul iyo wiilkiisa waxaa lagu abaalmariyay qayb dhul ah. Dhulkaas oo noqday halkii ay kasoo ifbaxday boqortooyadu Caasimadeeduna ay noqotay Bursa. Taasi waxay asaas u ahayd Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Hadda waxaa bilaabantay balaadhintii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta.
KACDOONKII BOQORTOOYADII CUSMAANIYIINTA
Sanadkii 707 H, qiyaastii sanadkii 1308 M , Cusmaan Ghazi wuxuu ku guuleystey furashada qalcadihii Katah, Lafkah, Aaqhasaar, iyo Qojhasaar. Sanadkii 712 H, qiyaastii 1313 M, wuxuu kaloo qabsaday qalcadaha Kabwah, Yakeeja Traklawa, iyo Takarar Bekari. Guushan waxay fududeysay in laga adkaado Bursa. Waxaa jiray dagaalo u dhexeeya Suldaan Cusmaan iyo Amiin Aqlinos sanado badan. Laakiin ugu dambayntii Taliyaha Christian ayaa ka gaadhay guulo gacantana ku qabtay magaaladii Cusmaan. Aakhirkii Aqlinos wuxuu noqday mid ku islaama dhaqanadii iyo aaminkii Cusmaan. Suldaanku wuxuu siiyay Aqinos magac markii dambena wuxuu ka mid ahaa taliyayaashii waaweynaa ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Dhowr taliye oo ka tirsan Boqortooyadii Byzantinia ayaa la dhacay shaqsiyadda Cusmaan. Boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxaa ka buuxay taliyayaal cusub oo muslimiin ah. Axsaab badan oo islaami ah oo ka mid noqday boqortooyadda , iyagoo ku bahoobay calanka Boqortooyadii Cusmaaniyiinta.
Markuu Cusman geeriyooday 1326 , dhulkii Boqortooyadii Cusmaaniyiintu waxay ahayd 16,000 Sqkm. Wuxuu kaloo ku guulaystay inuu helo dariiqa Badda Marmara ee Boqortooyadiisa. Labadii magaalo ee ugu muhiimsanaa waagaas, Nicaea (Iznik) iyo Bursa oo muhiimad weyn u lahaa Boqortooyadii Byzantine, ayaa laga adkaaday. Cusmaan ayaa lagu aasay Bursa. Sannadkii 1855, dhulgariir awgiis, qabrigii Cusman Ghazi ayaa dhulka yimid. Sanadkii 1868 , Sultan Abdul Aziz wuxuu dib u dhisay qabrigii Cusman .
Geeridii Cusman ka dib waxa boqortooyadii la wareegay wiilkiisa orhan.
Sultan Orhan Ghazi (Suldaankii 2aad ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta)
sanadku markuu ahaa 1326 , dhimashadii Cusmaan Ghazi kadib, Wiilkiisii Orhan Ghazi ayaa qabsaday boqortooyada. Orhan wuxuu dhashay 1281 .Orhan wuxuu ahaa taliyihii labaad ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Waxaa loo yaqaanaa aasaasihii dhabta ahaa ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Wuxuu raacay siyaasadihii aabihiis ee Boqortooyada iyo guulaheedii. Sanadkii 727 Hijri qiyaastii 1327 AD, wuxuu qabsaday magaalada 'Nikomedia', oo hadda loogu magacdaray mit Izmit ". Orhan Ghazi wuxuu aasaasay Jaamacaddii ugu horreysay ee Islaamiga ah. Magaalooyinka Moderno iyo Gamblique waxaa uu qabsaday 1331 iyo 1333 AD siday u kala horreeyaan. Sanadkii 736 Hijri, qiyaastii 1336 AD, wuxuu qabsadey magaalada Karesi oo saameyn ku yeelatay madaxdii siyaasada. Orhan kuma uusan joogsan dagaallada kaliya inuu ku faafiyo boqortooyadiisa, ka dib markii uu qabsaday magaalada Karesi, wuxuu doorbiday inuu sii wado boqortooyadiisa magaalooyinkii uu qabsaday 20-kii sanno ee u dambeeyay Orhan wuxuu ka dhisay Masaajido iyo iskuullo, gaar ahaan Bursa, oo ahayd caasimada Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Taasi waa sababta keentay in Bursa ay noqotay xarun muhiim ah oo Islaami ah goor dambe.
Diyaariye: Mukhtar Xasan Axmed